Xiddiga bartilmaameedka u ah Arsenal ee Samuel Umtiti oo shaaciyey Kooxdiisa xigta ee uu ku biiri doono – Gool FM
(Barcelona) 25 Nof 2019. Xiddiga bartilmaameedka u ah Arsenal ee Samuel Umtiti ayaa shaaca ka qaaday kooxdiisa xigta oo uu ku biiri doono haddii uu ka tago naadiga uu haatan ka tirsan yahay ee Barcelona.
Ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti ayaa loo tix gelinayey inuu u dhaqaaqi doono Arsenal, isla markaana uu Gunners kula biiri doono xiddiga ay isku Waddanka yihiin ee Alexandre Lacazette.
Arsenal ayaa muddo la la xiriirinayey daafaca Barcelona ee Samuel Umtiti, laakiin waxa uu haatan qirtay kooxdiisa xigta oo uu ku biiri doono haddiiba uu ka tagayo garoonka Camp Nou.
26-sano jirkaan ayaa muddo badan bartilmaameed u ahaa Gunners oo doonaysay inay ku xaliso dhibaatada ka haysata dhankeeda daafaca.
Laakiin Umtiti ayaa u sheegay shabakadda ciyaaraha Spanish-ka ah ee Sport inuu xiiseynayso inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Lyon haddiiba uu ka tagayo Barcelona, taasoo dishay rajadii ay daafacan ka lahayd Gunners.
Isagoo ka hadlayey mustaqbalkiisa Umtiti ayaa yiri: “Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo tababare, waxaan qoraalo (Notes) ka qaatay kuwa aan la soo shaqeeyey, habkooda tababarka iyo waxa ay qabtaan.
“Dib ugu laabashada Lyon waa suuro-gal, ciyaaryahan ahaan ama tababare ahaan.”
Umtiti ayaa shan sanadood ku qaatay kooxda Lyon intii u dhaxaysay sanadihii 2011 illaa 2016 ka hor inta uusan adduun dhan 24.6 milyan oo gini ugu soo dhaqaaqin garoonka Camp Nou.